Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti nickel dabeere alloy ihe na igwe anaghị agba nchara?-Industry News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Kedu ihe dị iche n'etiti ihe alloy nke nickel na igwe anaghị agba nchara?
Oge: 2021-07-31 HITS: 6
1. Nkọwa dị iche iche
Alloy dabeere na nickel bụ ụdị pụrụ iche nke igwe anaghị agba nchara, ụdị akwa igwe anaghị agba nchara nwere nnukwu nickel, chromium dị elu na molybdenum dị elu.
Igwe anaghị agba nchara bụ mbiri nke igwe anaghị agba nchara na acid na-eguzogide. A na-akpọ ígwè ndị na-eguzogide ọgwụ na-emebi emebi dị ka ikuku, uzuoku, na mmiri ma ọ bụ nwere nchara nchara.
2. Elu arụmọrụ
Alloys dabere na nickel nwere ezigbo nguzogide corrosion mpaghara. Ha nwere nguzogide corrosion dị mma na nrụgide nrụgide corrosion dị mma n'okpuru mmiri oké osimiri, ikuku jupụtara, crevices, na ọnọdụ mbuze dị ala. Ọ bụ ihe na-anọchi anya Ni-based alloys na titanium alloys. Ihe onwunwe. N'otu oge ahụ, ọ nwere mma elu okpomọkụ ma ọ bụ corrosion eguzogide. Na igwe anaghị agba nchara fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a.
3. Nhazi dị iche iche
Usoro nhazi nke nickel dabeere na alloys bụ ihe owuwu metallurgical austenitic kwụsiri ike.
A na-ekewakarị igwe anaghị agba nchara na martensitic steel, ferritic steel, austenitic steel, austenitic-ferritic (duplex) igwe anaghị agba nchara na mmiri ozuzo siri ike igwe anaghị agba nchara dịka steeti nzukọ siri dị.
Alloys nke ọma, gụnyere nickel rọrọ magnetik alloys, nickel kpomkwem nguzogide Alloys, na nickel kpo oku eletrik. Alloy magnetik dị nro na-ejikarị bụ Permalloy nwere ihe dịka 80% nickel. Ogo kachasị ya na ikike izizi ya dị elu, yana mmanye ya dị ala. Ọ bụ isi ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ eletrọnịkị.
Ihe ndị bụ isi alloying nke nickel kpọmkwem na-eguzogide alloys bụ chromium, aluminum, na ọla kọpa. Alloy a nwere nnukwu resistivity, obere okpomọkụ ọnụọgụ nke resistivity na ezigbo corrosion eguzogide, na-eji mee resistors. Nickel dabeere na electric kpo oku alloy bụ nickel alloy na 20% chromium, nke nwere ezigbo oxidation eguzogide na corrosion iguzogide, na ike ga-eji ruo ogologo oge na okpomọkụ nke 1000 ka 1100 ℃.
Kedu ihe bụ Die Forging? Kedu ihe nhazi nke Die Forgings?
Ọ dị mfe nhazi 2.4611 nickel-chromium-molybdenum alloy?